अकस्मात रबिनालाई के भयो यस्तो ? हस्पिटलले यस्तो सम्म गरायो भन्दै हस्पिटल बाटै आमा मिडियामा – " सुलभ खबर "
अकस्मात रबिनालाई के भयो यस्तो ? हस्पिटलले यस्तो सम्म गरायो भन्दै हस्पिटल बाटै आमा मिडियामा
आफ्नो ९ वर्षको छोरीको उपचारका लागि काठमाडौंमा भौतारिरहेकी एक महिलाले आर्थिक सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गरेकी छन् । पेटमा समस्या भएपछि सुरुमा नेपालगन्जको अस्पतालमा उपचारका लागि लगेकी छोरीलाई अस्पतालले यहाँ उपचार हुन सक्दैन काठमाडौं लैजाउ भनेर रेफर गरिदिए । काठमाडौंको बालकान्ती अस्पतालमा भर्ना गरेर दुई पटक शल्यकृया भयो ।
अस्पतालले दुई पटक गरेको शल्यकृया विगारी दियो । पेटमा निकै ठूलो घाउ अहिले पनि देख्न सकिन्छ । अस्पतालले गलत उपचार गरिदिएपछि आमाको मेहनत र पैसा सबै खेर गयो । अहिले सम्म १७ लाख रुपैया उपचारमा खर्च भइसक्यो । तर उनको स्वास्थ्यमा कुनै सुधार आएन । अहिले छोरीलाई ग्रिनसिटी अस्पतालमा उपचारका लागि राखिएको छ । अझै कतिपटक शल्यकृया गर्नुपर्छ भन्ने एकिन पनि छैन ।
आमासंग छोरीको उपचारका लागि अब थप पैसा पनि छैन । गाउँमा ऋण गरेर ल्याएको पैसा सकियो । अब आफन्तले उनको फोन उठाउन छोडे, घर परिवारले पनि उनलाई एक पटक फोन पनि गर्दैनन् । कसैले देख्यो भनेपनि पैसा नै माग्छेहोला भनेर बोल्न पनि चाहँदैनन् । तर उनी आफ्नो छोरी बचाउन चाहन्छिन् । त्यसैले सहयोगको अपिल गरेकी छन् । रविना योगी नाम गरेकी छोरी उनको दिसा गर्ने स्थान नै थिएन ।
त्यसैले उनले त्यो बालिकालाई उपचारका लागि नेपालगन्ज अस्पताल पुर्याएका थिए । दिसा गर्ने स्थान नै नभएपछि उनलाई पेटवाट पाइप लगाएर पेटभित्रको फोहर निकालिएको छ । दिसा गर्ने स्थान नै बिग्रिएका कारण अब ग्रिनसिटि अस्पतालले त्यो उनको अनौठो रोगको पहिलो शल्यकृयावाट केही सुधार भएको जनाएको छ ।
ग्रिनसिटि अस्पतालमा गरेको शल्यकृयावाट रविनाले अहिले पेटवाट होइन साविककै स्थानवाट दिसा गर्न थालेकी छन् । पेटको घाउ भने अझै निको भएको छैन । तर ग्रिनसिटी अस्पतालले भने रविनालाई स्वास्थ्य बनाएर सामान्य जिवन जिउने बातावरण बनाउन सक्ने दावी गरेको छ । उनको अब अन्तिम शल्यकृया हुने पनि चिकित्सकले बताएका छन् ।